तपाईको उमेरभन्दा १० वर्ष कम देखिन यसो गर्नुहोस्
जोकोही पुरष ह्याण्डसम लुकमा हिड्न चाहान्छन् । तर, पुरुषहरुको छाला महिलाको तुलनामा रफ हुन्छ । यसकारण उनीहरुलाई आफ्नो छालाको हेरचाह गर्नु आवश्यक पर्छ ।
जसरी सामान्य रुपमा महिलाहरुले गर्ने गर्छन् । सही तरिकाले छालाको सुरक्षा गर्न सकेमा तपाईको उमेरभन्दा १० वर्ष कम देखिन सक्नुहुनेछ भने तपाई निकै आकर्षक पनि देखिन सक्नुहुनेछ ।
पढ्नुहोस् ५ टिप्सहरु
१. अनुहारको छालामा विशेष ध्यान दिनुहोस । साबुनको प्रयोग गर्नुभन्दा फेसवासको प्रयोग गर्नुहोस् । समयसमयमा अनुहारको मसाज गराउनुहोस् । यसले अनुहारमा चमक दिने काम गर्छ ।
२. हप्तामा दुई तीनपटक कपालमा स्याम्फुको प्रयोग गर्नुहोस् र कपालको लम्बाइ राम्रो सँग मिलाएर कपाल काट्नुहोस् । आइब्रो मोटो छ भने सेप दिने काम गर्नुहोस् ।
३. सेभिङ गर्नु आवश्यक छ । अनुहारमा फोहोर जम्मा हुन नदिन पनि सेभिङ गर्नुहोस् । यदी दाह्री पाल्न चाहानु हुन्छ भने ट्रिमिङमा ध्यान दिनुहोस् । आफ्नो अनुहारको रुप अनुसार दाह्रीलाई मिल्दो सेप दिनुहोस् । यसले तपाई आकर्षक देखिनु हुन्छ ।
४. नङमा पनि बारम्बार ध्यान दिनुहोस् । नङ धेरै दिनसम्म नपाल्नुहोस् । समय समयमा काटिरहनुहोस् । पुरुषको लामो नङले गलत अर्थ दिने गर्छ ।
५. हात तथा खुट्टको छाला नरम गर्नका लागि सफाई र मोस्चराइजरमा ध्यान दिनुहोस् । जब हात, अनुहार, खुट्टा धुनुहुन्छ, त्यसपश्चात मोइस्चराइजर अवश्य लगाउनुहोस् । यसले तपाईको छाला नरम बनाइराख्छ भने आकर्षक देखिन मदत गर्छ ।